८ जनाको निधन, २३२ नयाँ संक्रमित थपिँदा ३८६ निको भए
यी हुन् १९ वर्षकी विश्वकै सुन्दर युवती (फोटोफिचर)
बलिउड स्टार आफ्नो जीवनलाई आफ्नै इच्छा अनुसार बा’च्न चाहन्छन् । आम मानिसको भन्दा फरक जीवनशैली बिताउने यी कलाकारलाई उमेर ढल्के पनि विवाह गर्ने सोच पलाउँदैन ।आजकल अक्सर महिलाले ३० बर्षको आसपासमा विवाह गर्दछन् । बलिउडका यस्ता केहि अभिनेत्री छन् जसको ४०/५० बर्षको उमेरसम्म विवाह भएको छैन ।
आज हामी बढि उमेरसम्म पनि विवाह नगर्ने बलिउड अभिनेत्रीका बारेमा चर्चा गर्नेछौ ।
नंदिता मोरारजी वा नम्रता सदाना, उनी नगमा के नाम बाट परिचित छिन् ।
सन् १९९० बाट फिल्म बागी मार्फत बलिउडमा प्रवेश गरेकि चर्चित अभिनेत्री नगमा अहिले राजनीतिमा सक्रिय छिन् । १९९० मा ‘बागी’ फिल्मबाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी उनको नाम एक समय पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुलीसँग जोडिएको थियो। गांगुली विवाहित रहेकाले उनीहरूको सम्बन्ध रोमान्सबाट थप अगाडि बढ्न सकेन।
तबस्सुम फातिमा हाशमी
तब्बू भनेर चिनिने यी नायिकाले पनि अहिलेसम्म विवाह गरेकी छैनन् । उनको नाम धेरै अभिनेतासँग जोडिँदै आएको छ । उनी १५ वर्षसम्म दक्षिण भारतीय अभिनेता नागार्जुनसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । तर, नागार्जुन विवाहित थिए । त्यसैले उनीहरुको बीचमा विवाह हुन सकेन ।
बलिउडमा राम्रो अभिनेत्रीका रुपमा छवि बनाएकी अभिनेत्री तबूले फिल्म विजयपथबाट बलिउडमा प्रवेश गरिन । उमेरले ४९ लागेकि तबु अझै अविवाहित छिन् । उनले दुई पटक भारतीय राष्ट्रिय पुरस्कार र ६ पटक फिल्मफेयर जितेकी छिन् ।
पूर्वमिस यूनिभर्स सुष्मिता सेनले समेत अझैसम्म विवाह गरेकि छैनन् । हुनत हाल उनी रोहमन शलसँग डेटमा छिन् । जसले चाडैँ विवाह हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर ४४ वर्षीय सुष्मिता अविवाहित नै हुन् । उनी एडोप्टद्धारा लिइएका दुई छोरीकी आमा हुन् । बलिउडकी नायिका तथा पूर्व मिस युनिभर्स सुष्मिता सेनको प्रेमको चर्चा विक्रम, भट्ट, मुद्दसर अजीज, सञ्जय नारंग, रणदीप हुड्डा, इम्तियाज खत्री, बन्टी सचदेव, अनिल अम्बानी र वासिम अक्रिमजस्ता व्यक्तिसँग थियो ।
सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है, गदर लगायतका फिल्मबाट बलिउडमा तहल्का मच्चाउन सफल अभिनेत्री अमीषा पटेल समेत अझैसम्म अविवाहित छन् । ४४ वर्षीय अमीषा अझै पनि बोल्ड अवतारमा फिल्ममा देखा पर्दै आएकी छन् । कुनै समय धेरै युवाको मनमा बस्न सफल यी नायिका लगातार फ्लप फिल्मपछि भने फिल्मी क्षेत्रबाट टाढा हुँदै गइन् । उनी विक्रम भट्टसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । यी दुईको बीचमा करीब ५ वर्ष अफेयर्स चलेको थियो । उनीहरुले सन् २००७ मा यो सम्बन्ध टुंग्याएका थिए । त्यसपछि उनी कनव पुरी नामक व्यवसायीसँग पनि सम्बन्धमा थिइन् तर यो सम्बन्ध पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकेन । सन् २०१० मा यो सम्बन्ध पनि सकिएसँगै उनले सञ्चारमाध्यम विवाह गर्ने मन नरहेको बताएकी थिइन् ।
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री काजलकी बहिनी तनिषा मुखर्जी ४२ बर्षसम्म पनि अविवाहित नै हुन् । उनी आफ्नी आमा तथा दिदी जतिको सफल हुन सकिनन्। बिग बोसमा समेत सहभागी भएकी उनको नाम अरमान मल्लिकसँग जोडिए पनि कार्यक्रम सकिएसँगै त्यो चर्चा सेलाउन पुग्यो। तर उनको विवाह भने भएन ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्लबार, पुस २८, २०७७ ११:१६:०९
मलेसियामा ज्यान गुमाएका १७ नेपालीको शव नेपाल आइपुग्यो
सम्बोधन गर्दागर्दै प्रचण्डले ओलीलाई सिध्याईदिन्छु भनेपछि…
समिर र अन्जुको ‘झम्के माया’मा स्वस्तिमाको बबाल डान्स
आफ्नै घरमा बस्ने सोनाक्षीको सपना पुरा, बान्द्रामा किनिन् फ्लाट !
साराका फ्यानहरुको लागि आयो अत्यन्तै खुशीको खबर !
जनतालाई रैतीकै दर्जामा राखेर श्री ३ महाराज सरहकै ‘सम्मान’ खोज्ने हो ?